नेपालमा प्रोटोन एक्स-५० सार्वजनिक, कति पर्छ मूल्य ? « Yoho Khabar
नेपालमा प्रोटोन एक्स-५० सार्वजनिक, कति पर्छ मूल्य ?
काठमाडौँ – मलेसियन कार निर्माता प्रोटोनको कम्प्याक्ट एसयुभी ‘प्रोटोन एक्स-५०’ नेपाली बजारमा सार्वजनिक भएको छ । नेपालका लागि प्रोटोनको आधिकारिक वितरक जगदम्बा मोटर्सले बुधबार गैरिधारास्थित सोरुमबाट नयाँ प्रोटोन एक्स-५० सार्वजनिक गरेको हो । प्रोटोन एक्स-५० नेपालका लागि मलेसियन राजदूत मोहम्मद फद्जल अबु हसनको उपस्थितिमा सार्वजनिक गरिएको हो ।
नेपाली बजारमा प्रोटोन एक्स-५० स्ट्यान्डर्ड, प्रिमियम र फ्लागसिप गरी तीन भेरियन्ट सार्वजनिक भएको हो । कम्पनीले बुधबारदेखि नै गाडीको आधिकारिक बिक्री सुरू गर्ने बताएको छ ।
प्रोटोन एक्स-५० एसयुभीमा १.५ लिटरको टर्बोचार्ज्ड थ्री सिलिन्डर इन्जिन छ । जसले अधिकतम १७७ पिएस पावर र २५५ एनएम टर्क जेनेरेट गर्छ । इन्जिनमा म्यानुअल मोडसहितको ७ स्पिड डुअल क्लच ट्रान्मिसन छ । गाडीलाई स्टेरिङ मोड र ड्राइभ मोड गरी दुई भिन्न मोडमा चलाउन सकिन्छ ।
यो गाडीमा फुल एलइडी हेडल्याम्प, १८ इन्चको ह्विल, फ्रन्ट वेलकम लाइट, फ्लोटिङ फ्लोर कन्सोल जस्ता विशेषताहरू समावेश गरिएको छ । आकर्षक डिजाइनमा तयार पारिएको यो गाडीमा थुप्रै सुविधाहरू रहेको कम्पनीको दाबी छ ।
सुरक्षा फिचरमा निकै ध्यान दिएर उत्पादन भएको एक्स-५० मा ६ वटा एयरब्याग, विद्युतीय स्टेबिलिटी कन्ट्रोल, अटोनोमस इमर्जेन्सी ब्रेकिङ , एड्जस्टेबल क्रुज कन्ट्रोल, विद्युतीय क्रुज कन्ट्रोल, लेन किप असिस्ट, लेन डिपार्चर वार्निङ, व्लाइन्ड स्पट इन्फर्मेशन प्रविधि, इन्टेलिजेन्ट हाइबिम कन्ट्रोल, टायर प्रेसर मोनिटर, अटो पार्क असिस्ट र ३६० डिग्री क्यामेरा छन् ।
यसमा ८ इन्च को इन्फोटेनमेन्ट स्क्रिन, आपतकालीन ब्रेकिङ, स्मार्ट एयर प्युरिफायर सिस्टमसहितको क्लाइमेट कन्ट्रोल, विद्युतीय रूपमा फोल्ड गर्न मिल्ने सिटहरू पनि छन् ।
नयाँ प्रोटोन एक्स-५० सार्वजनिक गर्दै जगदम्बा मोटर्सका अध्यक्ष साहिल अग्रवालले प्रोटोन एक्स-५० को विश्वव्यापी बजारमा राम्रो आकर्षण देखेर नै नेपाली बजारमा भित्र्याएको बताए ।
कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दीपक अग्रवालले यो गाडीले नेपाली ग्राहकहरूलाई समेत आकर्षित गर्नेमा विश्वास व्यक्त गरे। ‘प्रोटोन एक्स-५० ले बजारमा जगदम्बा मोटर्सको नाम र ग्राहकको विश्वासले यसको बिक्रीलाई थप उचाइमा पुर्याउने विश्वास छ,’ उनले कार्यक्रममा बोल्दै भने ।
मलेसियन राजदूत मोहम्मद फद्जल अबु हसनले एक्स-५० निकै आकर्षक र सुरक्षित एसयुभी भएको बताए ।
कम्पनीले नयाँ एक्स-५०को स्ट्यान्डर्ड भेरियन्टको मूल्य सरुवाती मूल्य ७१ लाख ९९ हजार रुपैयाँ तोकेको छ। प्रिमियमको मूल्य ७९ लाख ९९ हजार तोकिएको छ भने फ्लागसिप भेरियन्टको मूल्य ८४ लाख ९९ हजार रुपैयाँ तोकिएको छ ।